Iindaba ze-IPhone ziyaphendula | IPhone iindaba
Ngarcia2.0 | | IPhone iindaba, Ezahlukeneyo
Kwi-Actualidad iPhone siyabakhathalela abafundi bethu, ukuze usibuze imibuzo malunga ne-iPhone yakho: i-Cydia, iJailbreak, uqhagamshelo, abaqhubi, amaxabiso ... yonke into onokucinga ngayo. Siza kuzama ukuphendula yonke imibuzo esinokuyenza, ngokucacileyo ngeendlela zethu nolwazi.
Ndiyanikhuthaza nonke ukuba nibhale imibuzo yenu ngarcia_p@ymail.com.
Emva kokutsiba uneempendulo ezithile:
Ndingu-newbie kule iPhone ... nangona bendinayo okwam ixesha elide, andazi ukuba ndiqale ngaphi ukuqala kwejele.Ndine-iPhone 4 ene-iOs 4.3 kwaye bendifunda ngayo ukuqhekeka kwejele iintsuku ezimbalwa ukuyenza kweyam ... kuya kufuneka ndilinde ukuba ukuphuma kwejele kuphume? Okanye ngaba ikhona enye ye-4.3, ndingayifumana phi incwadana elula yokwazi ukuba mandiqale ngaphi? Xa kuphuma i-iOS entsha, ndingayihlaziya? Ndiyabulela kakhulu! UDani?
Molo Dani, ukuba unayo i-iPhone ene-iOs 4.3, ngelishwa, ekuphela kwendlela esemthethweni, okwangoku, kukwenza i-Jailbreak, "ekunyanzelayo ukuba uqhagamshele kwikhompyuter ukuqala (okanye ukuqala kwakhona) i-iPhone, nangona Kuya kufuneka ujonge njengoko i-untethered sele ilungile.
Olunye ukhetho onalo kukuthoba isidima kuhlobo 4.2.1 emva koko wenze ifayile ye jailbreak kuloo nguqulo.
Molo, ndinibhalele kuba ndinomhlobo onengxaki kwi-iPhone 4, kwaye kungenxa yokuba okwethutyana efumana umyalezo amaxesha ngamaxesha apho athi:
Olu ncedo alulungiselelwe le iPhone.
"Unokuva ingxolo ebangelwe kukuphazamiseka kwifowuni kwaye amandla esignali ephathekayo aya kuncipha"
Kwaye bendifuna ukwazi ukuba ungandinceda na ukuba ndazi ukuba kulindeleke ntoni.
Inenguqulo ye-4.2.1 ene-jaibreakme.
Molo uSalva, ndiyaqonda ukuba lo myalezo ubangelwa kukuba i-iPhone, njengefowuni, ivelisa uphazamiseko (oya kuthi ulivile ngamanye amaxesha ukuba ubeka kufutshane nesithethi). Kukho ezinye izinto ezilungiselelwe ukuthintela oku kungenelela kwaye, ke ngoko, ukubeka i-iPhone kwizinto ezincedisayo akuyi kufuneka ukuba zivelise. Ngokunjalo, zonke izixhobo zombane zivelisa neendawo zombane kwaye zinokuba nefuthe kumgangatho wokwamkelwa kwengxelo yenethiwekhi. Kuzo naziphi na kwezi meko zingentla, umyalezo uyakucebisa ukuba esi sixhobo asinakho ukurhoxisa nayiphi na imihlaba yangaphambili kwaye ungaphulukana nophawu lokugubungela okanye kunokubakho uphazamiseko oludlala umculo.
Okwangoku andazi ukwahlulahlula enye kwenye, kodwa kunokwenzeka ukuba ukusetyenziswa komkhono (kwimeko apho uqhagamshelo lwedokodo luyakuvumela oko) kuya kusebenza.
Mnumzana, ndihlala kwiRiphabhlikhi yaseDominican, kuba xa ucinga ukuvulwa kwe-iPhone 4 iOS 4.2.1 baseband 3.10.01 izakuphuma
Enkosi ngokuzimisela kwakho ukuphendula !!!
Pedro, ndicela uxolo ukukuxelela ukuba ndikhangele phambili kumntu okwazi ukuvula iiterminal ngohlobo 4.2.1. Okwangoku, ukuba unayo iMovistar njengomqhubi, ndingakukhuthaza kuphela kuGoogle "ukukhutshwa kwe-iPhone ngu-Imei" njengoko ezinye iinkampani zinikezelwe koku.
NdineJailbreak kwi-iPhone yam ngo-4.2., Ndiyenzile ngokwam ngoqeqesho lwakho, ngePoisson
Umbuzo wam kukuba ukufaka i-4.3.1 yejele ... kufuneka ndenze ntoni?
Faka ingxelo 4.3.1. Ukusuka kwi-itunes kwaye uyenze?
Xa uhlaziya kuhlobo lwe-4.3.1, ngaba wonke umxholo endiwufumeneyo xa ndisenza i-jailbreak uyakucinywa kwi-iphone yam?
Kwaye ndicinga ukuba ukufakela inguqulelo entsha yejele ayizukucima oku kungasentla.
PS: Nangona ndikwazile ukwaphula i-iphone ngaphandle kweengxaki kwaye ndinjalo, ndiyinto entsha kwezi zihloko
UAlberto, uguqulo lwangoku lweGreenpoison lufikelela kuphela kuhlobo lwe-firmware olungu-4.2.1, ke ukuba unomdla wokugcina i-terminal yakho yejele, nceda ungayihlaziyi ingxelo 4.3. Ndiyakukhuthaza ukuba uhlale unolwazi ngeendaba zakutshanje ze-iPhone, de kube kuvela iJailbreak ye-4.3.1.
Ukuba ufuna imixholo ye-iPhone yakho ingacinywa, ndincoma ukuba ufake i-firmware yesiko, eyenziwe ngeRedsnow, isixhobo sePwnage okanye enye efanayo. Ngokuchasene noko, ngokufaka i-firmware yoqobo evela ku-Apple uya kuphulukana nokuqhekeka kwejele.
Ndine-iPhone 3GS kunye ne-app logme in, efunyenwe kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo, bendisebenza nayo, ndidibanisa nge-3G, kodwa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo indixelela ukuba ndikhangele inethiwekhi yam. Ndibhalele ukungena ngemvume kwaye bandixelele ukuba ndithethe nomboneleli wesevisi yam yeselfowuni kuba kufuneka ukuba bavimbe uqhagamshelo lwam lwep2p. Kusenokwenzeka ukuba kunjalo? Ngaba uyawazi amanye amatyala?
Okwangoku asizazi iimeko ezininzi, kodwa ukuba nangaliphi na ixesha umntu uza kunye nengxaki efanayo okanye ngesisombululo, siya kuyazisa esidlangalaleni ukukunceda. Kuya kuba ngumdla ukuba usazise umqhubi wakho kunye nelizwe okhoyo, ukuba ukwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nalo.
Molo, ndiyathemba ukuba ungandinceda. Igama lam ndinguCristina Ndine-iPhone 4 kunye nesicelo se-WhatsApp. Wathumela iividiyo ngayo kwi-blakberry kwaye uyazibona zilungile kodwa ngokuzithumela kum ndiyazikhuphela kodwa akukho ndlela yokuzibona kunye nezinye ii-iPhones zindithumele kwaye ukuba ndiyazibona. Yeyiphi ingxaki endinokuba nayo? Enkosi
UCristina, kunokwenzeka ukuba ifomathi yevidiyo eveliswa yi-iPhone yakho iyahambelana neBlackberry yomhlobo wakho, kodwa i-iPhone yakho ayinakukwazi ukufunda ifomathi yeevidiyo ezenziwe yiBlackberry. Zama ukufumana ifomathi yezi vidiyo kwaye ujonge ukuba i-iPhone yakho iyakwazi ukuzidlala. Ukuba i-iPhone yakho ayinakukwazi ukuyidlala, cela umhlobo wakho ukuba aguqule iividiyo zibe kwifomathi ehambelana ne-iPhone yakho ukuze uzibukele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Iindaba ze-iPhone ziyaphendula
Uyisebenzisa kanjani i-Facetime kwi-iPhone yakho kunye ne-iPad yakho nge-imeyile efanayo